UniqueZone Info - Page 28 of 30 -
ဘီယာသောက်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုး (၁၁) မျိုး
justin | August 25, 2021
ဘီယာသောကျခွငျး၏ ကောငျးကြိုး (၁၁) မြိုး 1. ဘီယာသောကျတဲ့အခါ ဆီးရှှငျတာကို လူတိုငျးသတိထားမိကွမှာပါနောျ။ ဒါကကောငျးတဲ့ အခကြျပါပဲ။ ဘီယာက ကြောကျကပျကို အလုပျလုပျဖို့ လှုံ့ဆောျပေးလို့ပါ။ တဈရကျကို ဘီယာ တဈပုလငျးသောကျတာကေ ကြာကျကပျမှာ ကြောကျတညျခွငျးကို 40% လြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျတဲ့။ 2. ဘီယာမှာ အစာအိမျနဲ့ အူလမျးကွောငျးအတှကျ မြားစှာ အကြိုးဖွဈစတေဲ့ ဖိုငျဘာဓါတျ
ငွေကြေးကံကောင်းလာပြီး ဝင်ငွေသိသိသာသာ တိုးလာစေတဲ့ အချက်(၅)ချက်…
ငွေကြေးကံကောင်းလာပြီး ဝင်ငွေသိသိသာသာ တိုးလာစေတဲ့ အချက်(၅)ချက်… ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံမကောင်းချင်တဲ့သူ မရှိလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရှာသလောက်ပဲ ငွေက ဝင်မှာဆိုပေမယ့် ငွေကြေးကံကောင်းနေတာနဲ့ မကောင်းတာ နဲ့တော့ မတူပါဘူး …။သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကံကောင်းအောင် အခုဖော်ပြမယ့် အချက်လေးတွေကို လုပ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) ပိုက်ဆံအိတ် အရောင်” ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ရွှေရောင်၊
မွေးရာပါ ဦးနှောက်ချို့ယွင်းသော သားလေးကို ငြိုငြင်ခြင်းမရှိပဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမပြတ် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးနေသော ဖခင်
မှေးရာပါ ဦးနှောကျခြို့ယှငျးသော သားလေးကို ငွိုငွငျခွငျးမရှိပဲ ခစြျခွငျးမတေ်တာမပွတျ ကြှေးမှေးစောင့ျရှောကျပေးနသေော ဖခငျ ဗီယကျနမျနိုငျငံမှ Tran Van Hungအမညျရှိသော အသကျ ၅၈နှဈအရှယျ ဖခငျတဈဦးသညျ သားလေးတဈယောကျရှိရာ မှေးရာပါ အားနညျးခကြျကွောင့ျ မသနျစှမျးလေးဖွဈနရေပွီး ဆိုငျကယျကယျရီဆှဲသော အလုပျဖွင့ျ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပွုခဲ့သညျ။ အမြိုးသားကွီးသညျ အသကျ၁၉နှဈအရှယျမှာတငျ ဇနီးဖွဈသူက ဆီးခြိုရောဂါနှင့ျ ဆုံးပါးသှားခဲ့ပွီး ဦးနှောကျခြို့ယှငျးသော
“ရခိုင်ရိုးမပေါ်က ဖျားနာနေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးကိုဆေးကုပေးသလို တောရကျောင်းကိုပါ ပြန်လည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့တေးရေးမင်းကို “
“ရခိုငျရိုးမပေါျက ဖြားနာနတေဲ့ ဆရာတောျတဈပါးကိုဆေးကုပေးသလို တောရကြောငျးကိုပါ ပွနျလညျဆောကျပေးခဲ့တဲ့တေးရေးမငျးကို “ နယျလှညျ့ပွီး ကားတဈစီးနဲ့ ဆေးလိုကျကုပေးနတေဲ့ တေးရေးမငျးကို အနုပညာသဈပွတိုကျဖောငျဒေးရှငျး၊နယျလှည့ျနှလုံးလှဆရာဝနမြားအဖှဲ့မှ ဖြားနာပွီးလုံးဝမထနိုငျတော့တဲ့ ရခိုငျရိုးမတောငျပေါျက ဆရာတောျတဈပါးကို နပွေနျကောငျးတဲ့အထိ ဆေးကုသပေးနခေဲ့ ပါတယျ။ သကျတောျ(၇၆)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ ဆရာတောျကို အခမဲ့ဆေးကုသပေးတဲ့အပွငျ ဆရာတောျသီတငျးသုံးနတေဲ့ ယိုယှငျးပကြျစီးနတေဲ့တောရကြောငျးလေးကိုလညျး ပွနျလညျပွုပွငျပေးခဲ့ပါတယျ ။ အရငျကတောရကြောငျးလေးရဲ့ ကွမျးပွငျတှကေ ပေါကျပွဲဆှေးမွေ့နတောဖွဈသလို အမိုးအကာတှကေလညျး
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး‌နောက် အထည်ချုပ်အလုပ်သမားများ မူးလဲ၍ ဆေးရုံတင်ရ ရန်ကုန်၊ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် စက်မှုဇုန်တွင် အလုပ်သမားများကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အတင်းအကျပ်ထိုးနှံပေးပြီးနောက် အများအပြားမူးလဲပြီး သတိလစ်သွားသူ ၁၀၀ ကျော်ခန့် ကို ဆေးရုံတင်ထားရသည်။ ဩဂတ် ၂၁ တွင် Grand Enterprises Garment Co., Ltd (GEG) အထည်ချုပ်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ W
တစ်ခါကြည့်ရုံနဲ့ နှလုံးသားထဲအထိ စွဲမြဲကျန်ရစ်စေခဲ့လောက်မယ့် ဓာတ်ပုံများ
တစ်ခါကြည့်ရုံနဲ့ နှလုံးသားထဲအထိ စွဲမြဲကျန်ရစ်စေခဲ့လောက်မယ့် ဓာတ်ပုံများ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကနေ စကားပေါင်းများစွာကိုပြောနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေတွေအပေါ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ တချို့ဓာတ်ပုံတွေဟာ ခံစားချက်အပြည့်ရှိတာကြောင့် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရင်ထဲထိသွားမျိုးပါ။ တစ်ခါကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ နှလုံးသားထဲအထိ စွဲမြဲကျန်ရစ်စေလောက်ခဲ့လောက်မယ့် ဓာတ်ပုံများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. ဝံပုလေမ ဟာ ကြောက်လို့ ဝံပုလွေထီးဘေးနားမှာ ပုန်းနေတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ တကယ်တော့ တစ်ဖက် ဝံပုလွေက တိုက်ခိုက်လာမှာကို ဝံပုလွေမ
ပီလောပီနံကိုစိုက်ပျိုးနေစဉ် ခြံဝန်းအတွင်းမှ ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ၅၀ ကျော်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ရွာသားတစ်ဦး
ပီလောပီနံကိုစိုကျပြိုးနစေဉျ ခွံဝနျးအတှငျးမှ ရှေးဟောငျးဗုဒ်ဓရုပျပှားတောျ ၅၀ ကြောျကို ရှာဖှတှေေ့ရှိခဲ့တဲ့ ရှာသားတဈဦး ၂၀၂၁ ခုနှဈ၊ ဧပွီလ ၂၉ ရကျနေ့မှာ Champasak ခရိုငျ၊ Vang Wen ရှာမှ အသကျ ၅၀ အရှယျ ရှာသားတဈဦးက သူ့ရဲ့ ခွံဝနျးထဲမှာ ပီလောပီနံစိုကျနစေဉျ ဗုဒ်ဓရုပျပှားတောျ ၅၀ ကြောျကို တှေ့ရှိခဲ့ပါတယျ
ဒီနေ့တိုက်ပွဲစဖြစ် ပြေးကြလွှားကြတော့ ဒီကလေး ရယ် သူ့ အဖေနဲ့အမေရယ် ဆိုင်ကယ်တစီးနဲ့ပြေးကြရင်း ဆိုင်ကယ်မှောက်…
ဒီနေ့တိုကျပှဲစဖွဈ ပွေးကွလှှားကွတော့ ဒီကလေး ရယျ သူ့ အဖနေဲ့အမရေယျ ဆိုငျကယျတစီးနဲ့ပွေးကွရငျး ဆိုငျကယျမှောကျ…. အမဖွေဈတဲ့သူကခွထေောကျကြိုး ဆေးခနျးရောကျလာပါလရေော… ကိုယျတှလေညျးပွေးဖို့ ပစညျးထုပျနပေိုးနတေုနျးလုပျလကျစအလုပျရပျပွီး လူနာကွည့ျကြိုးတာသခြောတော့ ကြောကျပတျတီးကိုငျဖို့ပွငျကြိုးတဲ့ခွထေောကျ ကြောကျပတျတီးကိုငျပွီးသှားလို့ရပွီဆိုတော့… ကလေးအဖကေ သှားဖွီးပွပွီးဆရာမ ကြှနျတောျ မိနျးမကို အရငျ လှတျရာကြှတျရာသှားပို့လိုကျဦးမယျဒါလေးခဏယူထား ပွီးရငျပွနျလာယူမယျတဲ့… အဲ့ဒါလေးက အခြိနျတနျတော့ ဗိုကျဆာတော့လကျမကွီးတပွှတျပွှတျစုပျပါလရေောကလေးအဖကေလညျး ပွနျမရောကျသေးတော့တဘူးတညျးသော လကျကနြျနို့မူန့ျလေး ဖြောျတိုကျတောျပါသေးတယျ။
အပျိုဖော်ဝင်ခါစ ၁၆ နှစ်သမီးလေးအခန်းထဲကို အဖေတစ်ယောက် ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
အပြိုဖောျဝငျခါစ ၁၆ နှဈသမီးလေးအခနျးထဲကို အဖတေဈယောကျ ဝငျကွည့ျလိုကျတဲ့အခါ အခနျးက သပျရပျနပွေီး စားပှဲပေါျမှာ စာတဈစောငျ တငျထားတာ တှေ့လိုကျပါတယျ စာကို ဖတျကွည့ျတဲ့အခါ ခစြျသောဖဖေေ ဒီစာကို ရေးရတဲ့အတှကျ စိတျမကောငျးပါဘူး ။ ဖဖေနေဲ့ မမေကေို တကယျခစြျပါတယျ။ သို့ပမေယ့ျ သမီးရဲ့ ခစြျသူနောကျကို အပွီး လိုကျသှားပါပွီ။ စိတျမဆိုးပါနဲ့ ဖဖေေ
အဖွားဖြစ်သူက သူ့ကိုဆူပူနေသည့်အတွက် မျက်စောင်းလေးဖြင့် ကြည့်နေခဲ့သည့် ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်လေးကြောင့် လူအများ၏အချစ်တွေကို ရရှိနေသည့် ကလေးလေး
အဖှားဖွဈသူက သူ့ကိုဆူပူနသေည့ျအတှကျ မကြျစောငျးလေးဖွင့ျ ကွည့ျနခေဲ့သည့ျ ခစြျစဖှယျပုံရိပျလေးကွောင့ျ လူအမြား၏အခစြျတှကေို ရရှိနသေည့ျ ကလေးလေး ကလေးငယျတို့သညျ လမျးလြှောကျတတျစ စကားပွောနသေည့ျအခြိနျမြိုးတှငျ အလှနျစိတျဆိုးစိတျကောကျတတျပွီး ခစြျစဖှယျအကောငျးဆုံးအခြိနျဖွဈပသေညျ။ကလေးငယျတို့သညျ လောကကွီး၏အကွောငျးကို မသိရှိသေးဘဲ လောိူုဖွူစငျရိုးသားစှာဖွင့ျ ဖွတျသနျးနိုငျရနျ ကွိုးပမျးနသေည့ျ အခြိနျလညျးဖွဈပါတယျ။ ယခုတှငျလညျး အသကျ၂နှဈပငျ မပွည့ျ သေးသည့ျ ဝဝကဈကဈခစြျစဖှယျ ကလေးငယျလေးဟာ လိုငျးပေ ါျတှငျ လူအမြား၏